के बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको डिभोर्स हुन लागेको हो ? यसकारण हटाईन् इन्ष्टा बाट पति निकको थर
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा तथा निक जोनस बलिउड देखी लिएर हलिउड सम्मको एकदमै फेब्रेट जोडि रहेको छ । उनीहरुको जोडीलाई देखेर जो कोही लोभिने गरेको छ । तर अब यहि जोडीको छक्क पर्ने खबर बाहिर आएको छ । सोमबार अर्थात आज प्रियंका चोपडाले आफ्नो इन्ष्टामा रहेको बायो परिवर्तन गरेकी छिन् । यस परिवर्तनले खबरको बजार एकदमै गर्माएको छ ।
वास्तवमा प्रियंकाले आफ्नो इन्ष्टाग्राम बायो बाट पतिको थर जोनस हटाई दिएकी छिन् । प्रियंकाले यसो गर्ने बित्तिकै उनका फ्यान तथा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु बीच नै हलचल मच्चिएको छ । प्रयोगकर्ताहरु अनुमान लगाईरहेका छन् कि निक तथा प्रियंकाको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ ।
केहीले दुई जनाबीच डिर्भाेस हुन लागेको बताएका छन् । तर कुरा के हो भने उनले आफ्नो पतिको थर हटाए संगै इन्ष्टाको बायोबाट आफ्नो थर चोपडा समेत हटाई दिएकी छिन् । एक जना युजर लेख्छन्– के निक र प्रियंकाको सम्बन्ध बिच्छेद भएको हो ?
सलमान खान र अक्षय कुमार पछि प्रभास बने महंगा अभिनेता, आदिपुरुष’ का लागि लिए यति मोटो रकम
बलिउडमा सबैभन्दा महंगो कार चड्ने यि बलिउड चर्चित अभिनेत्रीहरु
प्रियंका चोपडाले जस्तै माधुरी दीक्षितले पनि विदेशीसँग कसेकी थिइन लगनगाँठो